सुत्ने बेला १५ सय किलो शुद्ध सुनबाट बनेको महालक्ष्मी मन्दिरको दर्शन गरि सुत्नुहोला ! - Nepal Insider
पैसा कमाएर परिवारलाई सुखी राख्न कुवेत पुगेको तीन महिनामै अस्पतालको बास
हेलिकोप्टर दुर्घटना, दुई जनाको मृत्यु
Home/रोचक/सुत्ने बेला १५ सय किलो शुद्ध सुनबाट बनेको महालक्ष्मी मन्दिरको दर्शन गरि सुत्नुहोला !
विश्वका प्रख्यात मन्दिरहरुका आ–आफ्नै विशेषताहरु छन् । तीमध्ये, भारतको तमिलनाडुमा रहेको महालक्ष्मी मन्दिर १५ सय किलो शुद्ध सुनबाट बनेको छ । भारतको तमिलनाडुको भेल्लोर सहरस्थित महालक्ष्मी मन्दिर १५ सय किलो शुद्ध सुनबाट बनेको छ ।
करीब १ सय एक्कड क्षेत्रफलमा फैलिएको यो मन्दिर बनाउन ७ वर्ष लागेको थियो । विश्वमै सबैभन्दा धेरै सुन प्रयोग गरिएको यो मन्दिर बनाउन ३ अर्ब भारु खर्च भएको बताइएको छ । अँध्यारोमा जब मन्दिरमा प्रकाश ठोक्किन्छ तब यसको दृश्य निकै अद्भूत देखिन्छ ।
सन् २००७ को अगष्टमा सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको यो मन्दिरको कलाकौशल, डिजाइन तथा निर्माण सबै हातैले गरिएको छ । साथै यो मन्दिरको एक–एक कलात्मक डिजाइन वैदिक मान्यतामा आधारित भएको बताइन्छ । यो मन्दिरभन्दा अगाडि भारतको अमृतसरस्थित गोल्डेन टेम्पल विश्वमा सबैभन्दा धेरै सुन प्रयोग गरिएको मन्दिरको रुपमा प्रख्यात थियो । जसमा साढे ७ सय किलो सुन प्रयोग गरिएको छ ।
नेपालमा अचम्मका शक्तिशाली मन्दिर जे मागेपनि पूरा हुने, तस्बिरबाटै दर्शन गराै
गर्भवती जाँच गर्न र महिनावारी हुने कर्मचारीलाई बिदा दिने निर्णय
आज दशैंको टीका लगाउने साइत १० बजेर ३५ मिनेटमा